ဘောလုံးဟောကိန်းများ The Strongest vs Bolívar 25 July 2021
Bolivia Primera División ၂၀၂၁
Jul 25, 2021 - 21:15
အကြား% အတွက်အချိုး ပျမ်းမျှဂိုးသွင်း အသင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုပျှမ်းမျှအားဖြင့်။
50% ကျော် = ပိုပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှု ယှဉ်ပြိုင်မှုပျှမ်းမျှထက်
အကြား% အတွက်အချိုး ပျမ်းမျှရည်မှန်းချက်များဝန်ခံ အသင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုပျှမ်းမျှအားဖြင့်။
50% ကျော် = ခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်ရေး ယှဉ်ပြိုင်မှုပျှမ်းမျှထက်
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနိုင်ရသောဖြစ်နိုင်ခြေ။ အပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်မှု နှိုင်းယှဉ် ၏ ရလဒ် အတွက်ပွဲစဉ် ဦး ခေါင်း
၅၀% ကျော် = အသင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။
% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် အသင်းအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်. ၅၀% ကျော် = ဤအသင်း၏အောင်ပွဲအပေါ်လောင်းကစားနည်းများ
ရေနံချောင်း ခန့်မှန်းချက် — 2ခန့်မှန်းချက်များ
1xTipz (56.88% ရေနံချောင်း / 5840) The Strongest အနိုင်ရသူ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ The Strongest vs Bolívar ဒီ၏ Jul 25, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် Bolivia Primera División ၂၀၂၁
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း The Strongest vs Bolívar?
Bolivia Primera División ၂၀၂၁ ဒီနေ့ခန့်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
များအတွက်ဘောလုံးဟောကိန်းများကဘာလဲ Jul 25, 2021?
၏နှိုင်းယှဉ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲခန့်မှန်းချက် Jul 25, 2021
Bookmaker vs Bet-In-Asia.com ဆိုဒ်
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် The Strongest vs Bolívar အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ Bolivia Primera División ၂၀၂၁ of Jul 25, 2021
ဒီဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိပြိုင်ပွဲ၏အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ စာအုပ်ပြုသူများ၏ဟောကိန်းများကိုအလွယ်တကူနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 The Strongest အနိုင်ရ၊ Bolívar အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် Leonardo Javier Ramos
အစားထိုး Aldo Emmanuel Quiñónez Ayala
အစားထိုး César Alejandro Menacho Claros
အားဖြင့် Leonardo Javier Ramos
အစားထိုး Rudy Alejandro Cardozo Fernández
အာရှစျေးကွက်ရှိအားကစားလောင်းကစားခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါသလား။ သင်၏ပထမဆုံးအွန်လိုင်းစာအုပ်ထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်အကူအညီလိုပါသလား။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ငွေသွင်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲရှိပါသလား။ သင်၏မေးခွန်းများကိုတဆင့်မေးပါ :
ဒီအီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့်အွန်လိုင်းအကူအညီ : info@bet-in-asia.com
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ အသုံးပြုသူများသည်အားကစားများလောင်းကစားဆိုဒ်များ ၁၈+ မှပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်အားသာချက်ယူရန်အနည်းဆုံးအသက် ၁၈ နှစ်ဖြစ်ရမည်